Air Canada inotanga basa idzva risingamire pakati peMontreal neKelowna
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Canada Breaking News » Air Canada inotanga basa idzva risingamire pakati peMontreal neKelowna
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Canada Breaking News • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Iyi nzira nyowani inowedzera kune yakakosha kukanganiswa neAir Canada pahupfumi hwenzvimbo uye neuyo wedunhu reBritish Columbia yakazara.
Kusvika kana kashanu pasvondo dzisingamise ndege pakati peMontreal neKelowna.
Ndege inobatanidza BC's Okanagan Valley ine ndege dzisingamire kune ese mana maAir Canada hubs: Montreal, Toronto, Vancouver neCalgary.
Air Canada inoshanda-mafuta-inoshanda Airbus A220-300 ngarava ichashandiswa munzira.
Nzira itsva yekumusha yeAir Canada neiyo yega isingamire sevhisi pakati peMontreal neKelowna yapembererwa kuKelowna International Airport nhasi. Nendege dzinoshanda katatu pasvondo, kuwedzera kusvika kanomwe pakati paJuly uye kashanu muna Nyamavhuvhu. Air Canada inobata mafuta-inoshanda Airbus A220-300 ngarava ine Bhizinesi Kirasi uye Ehupfumi makamuri anozoshandiswa munzira.
Iyi nzira nyowani inowedzera kune yakakosha mhedzisiro Air Canada ine pane hupfumi hwenzvimbo uye neuyo wedunhu reBritish Columbia rose. Pamberi pe COVID-19 denda, Air Canada yakapa madhora zviuru gumi nezviuru zvemadhora kuGDP yeGDP, pagore. Pamusoro pezvo, Kelowna parizvino yakabatana kune ese mana emahombekombe enhandare yendege ayo anobatanidza Okanagan Valley yakanangana neAir Canada yakakura network yepasirese pamwe neakawanda, imwe chete.
"Tine mufaro wekuparura seyi yega isingamire basa pakati peMontreal neKelowna, ichibatanidza nzvimbo mbiri dzinotungamira dzekushanya dzakakurumbira neQuebecers neBritish Columbians zvakafanana. Ndege dzedu nyowani Air CanadaAirbus A220-300 ine hunyoro-hwakadzikama uye ine zvakatipoteredza inoiswawo nguva yakanakira kubatana neAtlantic Canada nekune dzimwe nyika kuburikidza nekwaMontreal hub. Nyika painovhurazve, tinofara kubatsira shamwari nemhuri kubatana, uye kutsigira kupora kweCanada neindasitiri yekushanya. Tinoziva vanhu vanofara kufamba zvakare, uye tinotarisira kugamuchira vatengi vedu vari muchikepe, "akadaro Mark Galardo, Mutevedzeri Wemutungamiriri, Network Planning uye Revenue Management kuAir Canada.
"Wedu akavimbika weAir Canada aratidzazve kuti vanokoshesa vatakuri vedu nemugwagwa mutsva weMontreal-Kelowna," akadaro Philippe Rainville, Mutungamiri uye CEO weADM. "Nebasa rinobva kuYUL Montréal-Trudeau Airport parizvino rakadzikiswa uye sarudzo dzekufamba dzichiri shoma, kuwedzerwa kwenzvimbo nyowani yezororo yekuCanada kunouya panguva chaiyo! Uyu mukana wakanaka weQuebecers kuti vaone kunaka kweWestern Canada mukuchengeteka kwakakwana, vari muchizvarwa chitsva cheAirbus A220-300 ndege, idzo dzakanyarara uye dzakaungana kuMirabel (YMX), neruzivo rwekuno. Hatina kukwanisa kukumbira zvimwe! ”
"Mhepo isingamire yeMontreal-Kelowna yeAir Canada inoratidza mucherechedzo wakakura weYLW kuunza kufamba pakati peQuebec nedunhu reOkanagan," akadaro Sam Samaddar, Airport Director, YLW - Kelowna International Airport. "Montreal yakave inzvimbo yakakosha yekushanya muOkanagan uye tashanda makore mazhinji kuti tikwanise kubatana munharaunda iyi. Ndiri kutarisira kugamuchira vagari vemuQuebec neavo vanobatana neMontreal kuparadhiso yedu yemwaka mina. ”
"Tinofara kuona iyi nendege yakananga yakananga kubva kuMontreal kuenda kuKelowna ichivhura mikana mikuru yekufamba mudzimba muThompson Okanagan Dunhu," akadaro Ellen Walker-Matthews, SR VP uye Mutungamiri Anoshanda uye Mutungamiriri weThompson Okanagan Tourism Association. "Isu tanga tichiona kudiwa kwakanyanya kubva kuQuebec mukati memwedzi yakati wandei takabvunza kubva kune zvekushambadzira kwekufambisa, vezvenhau vezvekufambisa pamwe neumwe neumwe uye basa idzva iri richabatsira kugutsa nekukudza chikumbiro ichi."
Air Canada's Airbus A220-300 inoratidzira gumi nemaviri zvigaro zveBusiness Class uye zvigaro zveEconomy zveClass zvine zvivandudziro zvekumhanya nendege pachigaro chega chega mundege. Vatengi vane yakawanda yemunhu nzvimbo yekutenda kune yakafararira hupfumi zvigaro mumakungwa, uye hombe yepamusoro yepamusoro stowage mabhini eiyi ndege saizi iyi. Zvimwe zvinowedzerwa zvinosanganisira mahwindo mahombe uye akazara marara eUS ambient uye akajairika mamiriro emwenje anovhenekera mukuderedza kuneta kana uchifamba. Masiringi akakwirira, imwe nzvimbo yepafudzi uye yekuchengetera inoita iyi ndege nzvimbo isingaenzanisike muchikamu chakamanikana-chemuviri.
Iyo A220 inobatsira kuenderera mberi kweAir Canada nharaunda kuzvipira kwemambure zero emissions ne2050 nekuda kweayo matsva akagadzirirwa turbofan enjini ayo anofungidzirwa kupa kusvika makumi maviri neshanu muzana kuderedzwa kwemafuta ekushandisa pachigaro. Iyo A25 zvakare iri yakanyarara ndege muchikamu chayo. Verenga iyo Air Canada Airbus A220 pepa pepa kuti uwane rumwe ruzivo.
Ndege dzese dzeAir Canada dzinopa kuunganidzwa kweAeroplan uye kudzikinura uye, kune vatengi vanokodzera, kuwana mabasa ekutanga, Maple Leaf Lounges uye mamwe mabhenefiti.
F chiedza R kunze D eparture
nguva ndege Zuva Rekushandisa
AC365 Montreal kuKelowna 19: 05 21: 35 Airbus A220-300 Mon, Thursday, Tue, Fri, Zuva
AC364 Kelowna kuenda kuMontreal 10: 00 17: 30 Airbus A220-300 Mon, Chipiri, Fri, Sat, Zuva